Zụta ndi na - eso ndi SoundCloud - SoNuker
Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụrụ ndị na-eso ụzọ SoundCloud?
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta ndị na-eso ụzọ SoundCloud?
Ndị na-eso ụzọ na profaịlụ gị bụ otu n'ime ihe mbụ ndị ọbịa na profaịlụ gị na-ele. O nwere ike ime ka ha kpebie ozugbo ma ebe ahụ isoro gị ma ọ bụ lelee profaịlụ gị. Nnyocha egosiwo na mgbe inwetakwu ndị na-eso ụzọ, mmasị, echiche na echiche ị nwere ike ịnweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ. Na SoundCloud mgbe niile na-emelite / gbanwee algọridim ha ọ na-esiwanye ike ị wuo akaụntụ gị. Mgbe ịzụrụ ndị na-eso ụzọ SoundCloud site n'aka onye na-eweta aha ọma dị ka anyị ọ na-enye profaịlụ SoundCloud gị asọmpi asọmpi ọ kwesịrị ka a hụ ma nwee mgbanwe dị elu nke ịmepụta mmetụta nje ma ọ bụ iwulite uto ahịhịa.
Kedu mgbe a ga-anapụta ndị na-eso ụzọ m SoundCloud?
Iji hụ na ebumnuche kacha mma na nnyefe anyị ji aka nyochaa ahịa ọ bụla. Ya mere, ọ ga-ewe awa 24 ka iwu gị wee bido. 99% nke oge iwu gị ga-amalite n'ime awa ole na ole ma ọ bụ erughị. Ọ bụrụ n’inyere iwu ka ukwuu, ọ ga-aga n’ihu ụbọchị ọ bụla ruo mgbe arụzuru ọrụ ahụ.
Nke a tinye akaụntụ m n'ihe egwu?
Ọrụ anyị dị 100% nchekwa iji. N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ, anyị anaghị arịọ ma ọ bụ chọọ paswọọdụ akaụntụ mgbasa ozi gị. Ya mere, anyị anaghị achịkwa akaụntụ gị ma ọ bụ na-agwa ya ka ọ mee ihe ọ bụla ọ na-ekwesịghị ime. Ọrụ ndị anyị na-enye anwalewo ọtụtụ oge ma na-aga n'ihu na-emelite ma gbanwee site na ngwa mgbasa ozi mmekọrịta iji hụ na ọ kachasị mma na nsonaazụ kacha mma. SoNuker.com enyela ogo kachasị mma na mgbasa ozi mgbasa ozi Social Media kachasị n'ịntanetị.
Agbakwunyere ndị na-eso ụzọ SoundCloud na ụgbọ ibu gị.